सावधान ! तपाईका यस्ता गल्तीले गर्दा नै छिट्टै बुढो हुनुहुन्छ । (भिडियो सहित) – Complete Nepali News Portal
थुप्रैपटक मान्छेहरु आफ्नो उमेरको हिसाबले नभई पहिले नै बुढाबुढी हुन्छन्, जसको मुख्य कारण जीवनशैली हो। के तपाईले कहिले सोच्नुभएको छ तपाई उमेरभन्दा अगाडि नै किन बुढो हुनुहुन्छ भनेर ? कहिलेकाँही तपाईको कम उमेर हुदाहुदै पनि आँखा र गाला च्याउरी पर्ने समस्या छ ? यसले तपाईलाई नोक्सान पु¥याएको जस्तो महशुश गर्नुभएको छ । पक्कै पनि हामी मध्ये धेरैलाई यो महशुस भए कै हुनुपर्छ र तपाईलाई पनि । स्वस्थ्य शरिर हाम्रो अमुल्य सम्पति हो ।
यसलाई जोगाई राख्न हामीले आफ्नो खानपान र दैनिक दिन चार्यमा ध्यान दिन जरुरी छ । प्राय मान्छेहरु आफुलाई केहि हुदैन भन्ने सोच्छन्। धेरैपटक अस्वस्थ जीवनशैली अपनाएर हामी रोगलाई बोलाउछौँ। आज हामी तपाईलाई तपाईको नराम्रो बानीले समयभन्दा पहिला नै हड्डीलाई कमजोर बनाउने र चाडै बुढो बनाउने गर्छ त्यसका लागी समान्यतया तपाईले ५ कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ आज हामीले यी नै ५ वटा बिषयबस्तुको बारेमा जानकारी दिदै छौ । बाँकी भिडियोमा हेर्नुहोस ।